Yahoo! Chọọ Marketing ... Lo Furu M! | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 27, 2007 Na Mọnde, Nọmba 27, 2007 Douglas Karr
Direct Mail bụ ụzọ dị oke ọnụ. N'ihi na ọ dị oke ọnụ, enweghị ike ịme ya n'echeghị eche. M na-agwa ndị ahịa m na ohere iji nweta Direct Mail nke mmadụ nwere metụtara njikọ dị n'etiti igbe ozi ha na mkpofu ahịhịa ha. Naanị otu akụkụ nke akwụkwọ ozi mgbasa ozi dị mkpa karịa ebumnuche na ibe bụ ikike igbu na mkpọsa ahụ.
Taa, m natara a mara mma kere Direct Mail ibe si Yahoo! Chọọ Ahịa. Na-enye bụ a $ 75 n'aka kwupụta ụfọdụ isiokwu ahịa na Yahoo! nyocha igwe. Ebe ọ bụ na m ka malitere oru a netwọk mmekọrịta maka ndị agha Veterans, M na-eme ụfọdụ ule na ụfọdụ isiokwu aka ekedep.
Ezi mbipụta, n'ezie, bụ na ịkwesịrị itinye nkwụnye ego $ 30 na-akwụghachi ụgwọ na akaụntụ ahụ. Nke ahụ ka $ clicks ruru $ 45 nke m gaara eji, agbanyeghị, yabụ m gbalịrị idebanye. M na-ekwu nwara n'ihi na m zutere a njehie ozi na-erughị 4 ugboro na aha na ugwo usoro:
Direct Mail nwere otu ihe na mgbasa ozi ọ bụla. Must ga-enwerịrị ike iwepụta ngwa ahịa ma ọ bụ aka ọrụ gị ozugbo atụmanya ahụ gafere n'ọnụ ụzọ. Enweghi ike ịnapụta na-emebi ihe karịa na anaghị akpọsa ma ọlị. Ana m enwe olileanya na nke a Yahoo! Mgbasa ozi bụ mkpọsa nlele nke ezigara mmadụ ole na ole iji nwalee ikike nke sistemụ ha iji debanye aha ndebanye na ịzụta… mana eziokwu nwere ike bụrụ ihe megidere. Ha tufuru m! Mgbe m gbalịrị 4, anaghị m alaghachi.
Yahoo! o yikarịrị ka o ji ọtụtụ narị puku dollar na mpempe akwụkwọ ozi a. Na Onye isi ahia ahia dara ogbenye, onye haziri ihe di egwu, nwere ike uta ya maka oru ojoo nke mkpọsa.
Ọ gwụla ma, n'ezie, Yahoo! na-eme na-agụ m blog. 🙂
Tags: omeechikọta ọkaụlọ ọrụ na-ere ahịa ahịa ahịandị na-ere ahịa akpaakaahịa akpaaka ahịaAkuko akpaaka ahiaahịa akpaaka reviewsnnwale dị iche ichenyocha peejinri na mmekọrịta
Nov 27, 2007 na 10:37 PM
Ọ na-atụ m n'anya mgbe niile mgbe nnukwu ụlọ ọrụ na-achọgharị ihe dịka nke a. Ha nwere ihu ọma ị nyere ha ohere anọ, ọtụtụ mmadụ gaara akwụsị nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ. O di nwute na "nwa nwoke" ma oburu na anyi mehie dika nke a, ndi ahia anyi agaghi enye anyi ohere nke abuo.
Nov 28, 2007 na 11:59 AM
Ee, mana Direct Mail dị oke ọnụ naanị ma ọ bụrụ na emeghị ya nke ọma. Ọ bụrụ na ọ mere nke ọma, mgbe ahụ ọ nwere ike ịdị ọnụ ọnụ. O nwere ike ịbụ na-eri ego karịa ihe dị ọnụ ala / free dị ka email ahịa, ma nendsche ịbụ ihe ịga nke ọma. Ọ bụ ihe a pụrụ ịtụ n’ihe atụ, a pụrụ ịhazigharị, ma a pụrụ ịnwale ya. Ka anyị hụ redio ma ọ bụ TV na-eme nke ahụ. (Ya mere, onye ọkachamara DM kwuru! 😉)
Nov 28, 2007 na 12:47 PM
Ekwenyere m! Ekwesịrị m kwuru 'ego dị mkpa' karịa 'ọnụ'. Ọ bụghị n’ezie mmefu mgbe emere ya n’ụzọ ziri ezi ma nyere aka mee ka ị nweta ọtụtụ nnata ego. Ọ dị mma, adị m njikere, ma nwee ike ịzaghachi na mpempe a!
Ogbe ndịda Houston
Nov 29, 2007 na 11:54 AM
Nnukwu okwu. Yahoo si otu ndi otu ahia n’etufu otutu ndi mmadu ha nwere ike iebido ya na mbido ya. Echere m mgbe niile otu n'ime ndị ahịa kachasị mma bụ Jay Abraham - ma eleghị anya ha kwesịrị ịkpọ ya.